थाहा खबर: चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ : सच्चा प्रेमको प्रतिविम्ब
चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ : सच्चा प्रेमको प्रतिविम्ब
९० भन्दा बढी हलमा एकसाथ प्रदर्शन,टिकट लिनेको जताततै भीड
चितवन : प्रेमकथामा आधारित चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ शुक्रबारदेखि देशभर ९० भन्दा बढी हलमा प्रदर्शनमा आएको छ। ‘म यस्तो गीत गाउँछु,’ ‘प्रेम गीत २’ जस्ता प्रेमकथाका सफल चलचित्रपछि नेपाली सिने जगतमा भित्रिएको ‘ए मेरो हजुर २’ले शुरुआती प्रदर्शन राम्रै वाहवाह पाएको छ। युवा रोमान्सलाई कथामा उनेर १० बर्षपछि सिक्वेलमा बनेको पहिलो चलचित्र ‘ए मेरो हजुर’की तत्कालिन नायिक झरना थापाको डेव्यू निर्देशन रहेको उक्त चलचित्रले सार्थक बालप्रेमलाई मुख्य विषय बनाएको छ।
सच्चा प्रेम जुनसुकै अबरोधले पनि रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा गौरवसँगै विहे हुनै लाग्दा पनि मायाँ र प्रेमको मिलनले उजिल्याएको छ। विभिन्न सामाजिक विसंगतिहरुलाई समेत नंग्याउने प्रयासले चलचित्र जिवन्द बन्न पुगेको छ।
कथाले समलिंगिहरुप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणलाई तिखो प्रहार गरिएको छ। देशको भेषभूषा र संस्कृतिको सम्बद्र्धनमा एक कदम अगाडी छ। चलचित्रमा आएका सबै गीतहरु उत्कृष्ट बनेका छन्। यसमा मुख्य भूमिका प्रेम र मायाँको छ। फिल्मलाई कमेडी बनाउन ‘जे’ले साथ दिएका छन्। प्रेम र माया सहपाठी हुन्। एक अर्कालाई असाध्यै मायाँ गर्छन्। स्कुल बसमा आउँदा जाँदा उनीहरुको लुकामारी नै हुन्छ।
पोखरामा पाँच कक्ष पढ्दा गीतार लिएर प्रेमले चलचित्र ए मेरो हजुरको चर्चित गीत फूलको थुंगा हौ की,बगेको गंगा हौ....गाउँछ। माया प्रभावित हुन्छे। प्रेमका बुबाको काठमाडौ सरुवाफसँगै फक्रन लागेको प्रेमको कोपिलामा तुसारो पर्छ। प्रेमले भेट्न आउने कसमखाँदा मायाँ मायाको बालप्रेम झल्कन्छ।
‘मलाई चिनेनौ भने नी।’ कतिपय कुराहरु मनैले था पाउँछ चिनिराख्नै पर्दैन, प्रेम भन्छ। प्रमिस ! प्रेमले उत्तर दिन्छ,‘आफु त सानो मान्छे ठुलो स्वर प्रमिस कुरा गरिन्छ फुल डोज।’
प्रेमले आफ्नो बालापनको साथीहरुसँग बेलिविस्तारपछि साथी ‘जे’को योजनामा स्केच बोकेर माया खोज्न पोखरा पुग्छन्। बाटामा लिफ्ट पाएका गौरवका कारण मायासँग सहज भेट हुन्छ। उनीहरु बालापन सम्झाउने कोशिस गर्छन्। ग्यारेजमा थन्किसकेको त्यो साछी स्कुल बस ल्याएर स्मरण गराउने प्रयास हुन्छ। यस्तै यस्तैमा मध्यान्तर बित्छ।
उनीहरुले बाटोमा लिफ् दिने व्यक्ति गौरवसँगै आर्य बनेकी मायाको विहे हुने पक्का भएको कुरा पोखरा पुगेपछि मात्रै थाहा पाउँछ प्रेमले। तैपनि हरेस खाँदैन। मर्निंङ वाकको समयको सदुपयोग निरर्थक हुन्छ।
आर यु फलोईङ मि ? नो। धेरैदिनदेखि वाच गरिरहेकी छु तिमीलाई, मलाई कसैले फलो गरेको मन पर्दैन। प्रेम जवाफ दिन्छन्, ‘तर मलाई मन पर्छ, अझै तिमी जस्तो गर्जियस लेडिज अगाडी आउँछ्यौ। आफु त सानो मान्छे ठुलो स्वर लभ गरिन्छ फुल डोज।’
अझै मायालाई याद दिलाउने प्रयास छाड्दैन प्रेमले। म प्रेम। तिम्रो चाईल्डहुड फ्रेण्ड, ह्वाट ? तिमीजस्तो कति प्रेमसँग भेटभयो। मायाँ, नाम पनि याद छैन तिमीलाई ? याद आएर नी के फरक पर्छ। मैले कति स्कुल चेन्ज गरें र स्कुलसँगसँगै ब्वाईफ्रेड पनि। सिक्समा एउटा, यटमा एउटा, टेनमा एउटा। तिमी जस्तो प्रेम त कति भेट भयोभयो। ईट्स् द लभ स्टोरी।
मायालाई फकाउन टे«किङको बहानामा मनाङ जान्छन्। तिलिचोताल घुम्छन्। प्रेमले मायाँलाई थुप्रै प्रयास गरेर फकाउँछ। त्यहाँबाट फर्किदा उल्टै उनीहरु वीच नै झगडा हुन्छ। यता घरमा गौरबसँगको विहेको चाँचोपाँजो गरिएको हुन्छ। प्रेम विहेको अघिल्लो राती नै काठमाडौ फर्किन्छ।
जब माया विहेका लागि मेहन्दी लागाउन थाल्छिन्। ‘जे’ले प्रेमको असली प्रेम बताउँछ। उनी भावुक हुन्छिन्। साहित्यकार झमक घिमिरेको चर्चित पुस्तक ‘जीवन काँडाकी फुल’ पुस्तक लिएर बुबाले भनेको कुरा सम्झन्छे, ‘काँडामा पनि हिड्न सक्नुपर्छ, मनले जे बोल्छ त्यो सही हुन्छ।’ अनि निर्णय बदलेर मायाँले दादासँगै आफुले गौरबसँग विहे नगर्ने निर्णय सुनाउँछे। विहेघरमा सन्नाटा छाउँछ। ‘धनसम्पत्ती मानप्रतिष्ठा सब कमाउन सक्छु म पनि।
सम्पत्ती र हाई क्लासको लोग्ने विहे गराईदिएर आफ्नो बहिनीलाई किन कमजोर देखाउन खोज्नुहुन्छ ? हजुरको बहिनी संसार जित्न सक्छे दा।’ सब कुरा सुनिरहेको हुनेवाला श्रीमान गौरवले सहज लिंदै भन्छन्, ‘हरेक मान्छेको एउटा कथा हुन्छ र त्यसमा एउटा हिरो। यो कथा तिम्रो थियो। जसमा म जबरजस्ती हिरो हुन पुगे छु। सायद मलाई अरु कुनै कथा होला, जसले मलाई वेट गरिरहेको छ।’
पुरानो स्कुलको थोत्रो बसमा प्रेमलाई खोज्दै काठमाडौ पुग्दा प्रेम सिंगापुर जान विमानस्थल प्रवेश गरिसकेको हुन्छ। बालापन झैं बसमा बसेर मायाले आफ्नो माया माइकबाट पोख्छिन्। त्यो सुनेर प्रेम फर्किन्छ। अनि उनीहरुको डाईलग उल्टिटन्छ। ‘मलाई कसैले फलो गरेको मन पर्दैन,’ मायाको प्रतिउत्तर आउँछ, ‘तर मलाई मन पर्छ, आफु त सानो मान्छे ठुलो स्वर लभ गरिन्छ फुल डोज।’
बेलाबेलामा ए मेरो हजुरको टाईटल गीतले दिवंगत नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई सम्झाईरहन्छ। श्रीधर्मेन्द्र उनको फ्यान भएकाले स्कुल बसभरी पोष्टर टाँसेर १० बर्ष अघिको फिल्मलाई जिवन्त बनाउन खोजिएको छ। तर माया र प्रेमको परिवारको बारेमा चलचित्र मौन छ। नायकमाथि हावी बनेका ‘जे’ अर्थात सलोन बस्नेत कमेडी कलाकारमा देखिएका छन्। डेव्यू गरेका नायक सलिनमान बनिया (प्रेम)को अभिनयमा अझै उत्कृष्ट हुने ठाउँ छाडेका छन्।
तर साम्राज्ञी राजयलक्ष्मी शाहको यो दोस्रो फिल्म भएपनि उनको अभिनय दर्शकले मन पराएका छन्। चलचित्रमा दर्शकले सोचेजस्तो प्रेममा उतारचढाव छैन। सानो द्वन्द्वको दृष्य छ। मोड विनाको प्रेम सच्चा छ। दर्शकमा कौतुहलता ल्याउने कथा छैन। शुक्रबारको पहिलो सो हेरेकी समीक्षा आलेले फिल्म राम्रो बनेको बताइन्।सच्चा प्रेमको प्रतिकको रुपमा ‘ए मेरो हजुर २’लाई लिन सकिन्छ। बालापनको प्रेम वीचमा हराएपनि अन्तत मिलन हुनपुग्छ।
चलचित्र पोखराको फेवातालमा घुमेको छ। मनाङका दृष्यहरुले दर्शकलाई मोहित पार्छ भने अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचोताल र हिमश्रृंखलाले ल्योभ्याउँछ। हरेक गीतले मन छुन्छ। उकालीमा जाँदा जाँदै दाहिने पर्यो बर..मायाँ कता पर्यो घर...‘मायाँ दिन्छु मुटु दिन्छु...’।
लोक भाकामा गाएको ‘मलाई दुई चुल्ठे बाटेर फूल लाउन मन पर्छ टिपिदेउन साहिला दाई...’ गीत मर्मस्पर्शी छन्। सुहाना इन्टरटेनमेन्टले तयार पारेको चलचित्र सुनिल थापाले बनाएका हुन्। हरिहर अधिकारीको कथामा अन्य कलाकारहरु अम्बर सुवेदी, अनुराग कुँवर, बुद्धि तामाङ, अनुभव रेग्मी, विल्सनविक्रम राईको अभिनय छ। चलचित्र पत्रकार रवि अधिकारी फिलम गीत संगितको लोकेसनसँगै बालप्रेम भुल्न नसक्ने देखाएको बताउँछन्।
आखिर दुवै चलचित्र प्रेम कथा मै आधारित छ। तर पहिलेको तुलनामा २ को कथाबस्तु फितलो छ। पहिलेको चलचित्रमा मायाँ पाउन विभिन्न ठक्करहरु आएका छन्। शिव रेग्मीको निर्देशक ससक्त छ। सच्चा प्रेम पाए रै छाड्छ भन्ने उदाहरण दुईटैमा छ। सम्भ्रान्त परिवारभन्दा मध्यम परिवारको फरक देखाइएको छ। सम्पत्तीका लागि आफ्नै नातेदारले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने पाठ यसमा छ। अनेक मोड र घुम्तीले प्रेममा दर्शकलाई कौतुहलता जगाईरहन्छ। हरेक कलाकारको अभिनयमा खोट छैन।
ए मेरो हजुरमा ईश्वर बनेका दिवंगत नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र श्रद्धा बनेको नायिका झरना थापाको मुख्य अभिनय छ। पहिले ईश्वरले मन पराउँदा श्रद्धाले विपिनलाई मन पराएकी हुन्छ। तर विपिनको मायाँ फोस्रो धन सम्पत्ती हत्याउनकालागि हुन्छ। उनका आफन्तहरुले सम्पत्ती हत्याउनका लागि श्रद्धालाई मार्न लखेट्दा गाडीमा ठोक्किएर श्रद्धाको दृष्टि गुम्छ। पहिले गाउँबाट निकालिएका ईश्वरले उनलाई बचाएर लान्छ।
पालन पोषण गर्छ। चोरेको पैसाले उनको आँखाको अपरेशन गरेर जब दृष्टि फर्काउँछ। अनि श्रद्धाले फेरी पुरानो ईश्वरलाई देखेर घृणा गर्छिन्। विदेश गएका विपिन फर्केर श्रद्धा भेट्छ। मायाँको जालमा फसाएर विपिनले श्रद्धालाई मार्न षड्यन्त्र बुन्छ।
ईश्वरले बचाउने क्रममा फाईट हुन्छ। त्यही बेला ईश्वरको पर्स खस्छ र श्रद्धाले पहिले दृष्टि गुम्दा खिचेको संयुक्त फोटोबाट माया फर्किन्छ। अनि उनीहरुको पुनमेल हुन्छ र चलचित्र समाप्त हुन्छ